Germany yakaburitsa kodhi yeCorona-Yambiro-App, chirongwa chekutevera hutachiona hwecoronavirus | Linux Vakapindwa muropa
Germany yakaburitsa kodhi yeCorona-Yambiro-App, chirongwa chekutevera hutachiona hwecoronavirus
Hurumende yeGerman yakafumura munguva pfupi yapfuura kuruzhinji kusunungura kodhi kodhi ye yako kunyorera "Corona-Yambiro-App", iyo yakagadzirwa kuti ibatsire kudambura ngetani yezvirwere zvecoronavirus.
Icho chimwe chezhinji mafomu erudzi urwu ayo, sekureva kwehurumende dzeEuropean, anobvumidza kutangazve kufamba nekushanya mukuchengeteka kwakazara.
Sevanotsanangudza vanogadzira pane iyo GitHub peji:
«Iyi purojekiti inovavarira kugadzira tekinoroji-based application ine nzira yakasarudzwa, inofemerwa zvakanyanya neDP-3T (Yakatemerwa Nzvimbo Yekutevera Yekutevera Kuchengetedza Yakavanzika) uye TCN nePrivacy-based protocols uye kuchengetedzwa kwekuteedzera maratidziro. Apple neGoogle vanobatana.
Kunge DP-3T uye TCN protocol, iyo backend kunyorera uye zvivakwa ichave yakavhurika sosi, pasi peApache 2.0 ″ rezinesi.
Chirongwa Corona-Yambira ikozvino yave kuwanikwa yeApple uye Android zvishandiso. Pane iyo iPhone, inoshanda kubva kuIOS 13.5 (yazvino vhezheni yeIOS) iyo inowanikwa kubva ku iPhone 6s.
Zvefoni Android, Bluetooth LE inofanira kutsigirwa. Zvakare, Android 6 kana nyowani inofanirwa kunge ichimhanya uye neGoogle Play masevhisi anofanirwa kuvhurwa, nekuti kambani haina kupa nzvimbo kuburikidza neApple, asi kuburikidza neaya masevhisi eGoogle.
“Chikumbiro ichi hachisi mushonga. Haisi yemahara kupfuura. Asi chishandiso chakakosha kubatsira kubata denda iri, "Gurukota rezvehutano VaJens Spahn vakadaro pachiitiko chekutanga.
Germany inobatana neItaly, Poland neLatvia, iyo yakavhura mashandisirwo anoenderana netekinoroji kubva kuApple neGoogle, iyo inochengetedza zvakavanzika nekuchengetedza macustomer eBluetooth zvakachengeteka pamidziyo.
Gurukota rakaramba kutaura kuti vanhu vangani vangazoda kushandisa iyo app. kuti chirongwa ichi chionekwe sechakabudirira. Yakarambawo ongororo yakaburitswa neUniversity yeOxford yaiti chikumbiro chakadai chingangobatsira chete kana chikashandiswa nevanhu vanopfuura makumi matanhatu muzana.
Spahn akadaro mashandiro anoenderanawo nemashandisirwo anoitwa vanhu kurodha Anwendung, uye iye kunyanya akakurudzira vanhu paruzhinji chokufambisa kuiisa. Kupinda kwavo kwaizoita "musiyano wehunhu," akadaro Spahn.
Hurumende yeGerman inoti iyo app yakadhura makumi maviri emamiriyoni euros kukudziridza uye iwe unozoda anenge mamirioni matatu
Sebastian Wolf (SAP), mumwe wevanogadzira yekushandisa, akaedza kupindura mimwe mibvunzo kubva kumaGerman paCorona-Yambiro-App.
Mumwe akabvunza kuti nei budiriro ichidhura zvakanyanya uye wadii kushandisa iyo iriko yekunze kunyorera. Iwe akatsanangura kuti izvi zvainyanya kukonzerwa nekubatanidzwa muchirongwa cheGerman chekuchengetedza hutano. Zvakare, zvimwe zvakawanda pamusoro penyaya iyi zvinopihwa mune yekushandisa yekuvakisa repositi.
Mumwe aida kuziva kana iko kushanda kunoshanda kumashure, ndokuti, kana hwindo ravharwa, uye akaronga, dai zvirizvo zvazviri, kusiya icon inoonekwa mune ziviso kuratidza kuti iri kushanda. Iyo yekuvandudza yakapindura "hongu, inoshanda kumashure."
Vashandisi veInternet vanoita kunge vanosimbisa zvirevo zvake, seizvo mumwe wavo anoti:
»Chikumbiro chinogara chichitarisa paInternet kana chakasangana nemunhu akaongororwa kuti ane hutachiona. Naizvozvo, iko kunyorera kune mashoma mashoma pane vhoriyamu re data. Ini ndinoverenga nezve 6 KB paawa. Mumwe oti: "Chishandiso chinoshandisa ingangoita 1,5MB pazuva."
Kunze kwechiziviso ichi, nhengo dzeEuropean Union dzakabvumirana zvehunyanzvi zviyero kuitira kuti zvikumbiro zvemunyika zvigone 'kutaura kune mumwe nemumwe', danho rekukwanisa kutsvaga hutachiona kumiganhu.
"Sezvo mwaka wekufamba unosvika, zvakakosha kuona kuti maEuropean vanogona kushandisa Anwendung kubva munyika yavo chero kwavanofamba muEU," Commissioner Thierry Breton vakadaro muchitaurwa.
Nekudaro, kushingairira kuruzhinji kweapp kwakasanganiswa; Svondo rapfuura sarudzo yePolitbarometer yeZDF yakawana kuti 42% yevaGerman vaida kuitora, 46% vakati kwete, nepo 8% vasina smartphone nyowani yakakwana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Germany yakaburitsa kodhi yeCorona-Yambiro-App, chirongwa chekutevera hutachiona hwecoronavirus
iyo app ichaona sei munhu ane hutachiona, nekusaziva?
Beyond tekinoroji inoshandiswa, sezvo vanhu vazhinji vari asymptomatic.
Kurwisa Google neAmazon. Kupomerwa kwemakwikwi asina kunaka uye kushayikwa kwemitemo yakajeka